F108 Epoxy oo ku dhegan gunta malabka aluminium
Details Baako: Caag caag ah
Supply Kartida: 10 Ton / Konton Maalintii
BEECORE Epoxy Adhesive F108 waa labo-qaybood, daaweyn heerkulka qolka, dhajinta qaab dhismeedka sare. Waxaa loo dalbadaa guddi malab aluminium ah oo ka kooban. Waxay leedahay awood isku xirnaan sare, xoog xiiran iyo hoos u dhac dareere ah. Majiraan ur aan caadi ahayn iyo waxyeelo aan wanaagsanayn bay'ada iyo isticmaaleyaasha.
Product Badeecadan waxaa inta badan loo isticmaalaa isku xidhka iyo dhejinta dhagaxa gudaha ah, sida tooska ah isku xidhka iyo dhejinta marmar & granite iwm darbiga gudaha ama derbiga la taaban karo ee birta, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa isku xidhka agabyada kala duwan sida dhagaxa, bir, la taaban karo, sibidhka sibidh, dhagaxa dhoobo ah iwm.
Waxaa loo istaahilaa isku xidhka iyo isku xidhka biraha, alwaaxa iyo alwaaxda PVC iwm. Halkaas oo xooga sareeya iyo adkeysiga adkaysiga looga baahan yahay, sida tareenka, dhismooyinka gawaarida, isu imaatinka gawaarida.
● Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa isku xidhka qaybo qalab dhismeed oo badan.
Strength Xoog isku xirig sareeya
Waa in lagu ridayaa bakhaar ama qol heerkulkiisu hooseeyo, waqtiga ka fiicnaana aan ka badnayn 6-12 bilood.
● Alaabada waa in lagu keydiyo meel qalalan, hawo qaboojiye iyo meel qabow, nolosha shelf waa hal sano, waa la sii wadi karaa isticmaalkiisa haddii baaristu caadi tahay.
Alaabtaani waa shey halis ah oo caam ah, waa in laga ilaaliyaa dabka, meesha kuleylka, iska ilaali roobka iyo qoraxda, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah
Aluminium malab-badeedka asaasiga ah
Iftiiminta Awoodda Weyn ee Aluminium malab-walax Weyn Qalabka Dhismooyinka
Tayo iyo xoog sare oo duulista Hawada Malak Badda malabka leh adkaysiga meeraha
5-Xarumaha Mashiinka Mashiinka ee "CNis" CNC Machines Center for Composite, Aerospace, Automotive & Shipping